Imishanguzo Ebhebhethekisa Ububi Okhishwa Ngubhubhane-Izindaba-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co, Ltd.
Awenze Kanjani Uhlaselo Oluvuselela Imishini Ethengisa Imishini
Isikhathi: 2021-03-18 Hits: 7
Ngonyaka odlule, ochwepheshe bezokwelapha kanye nezigungu ezilawulayo zeluleke abantu ukuthi banciphise ukuxhumana nabanye uma kungenzeka. Lokho'esinye sezizathu abathengisi abaningi ngokwengeziwe banikela ngokuthwebula i-curbside, kungani izinkampani zokulethwa zigcwele nokuthi kungani ama-automats evuseleleka. Lapho's futhi enye indlela yokuxhumana engathintwa leyo's sibonile ukwanda ngesikhathi salo bhubhane - imishini yokuthengisa.
Kodwa thina'Asikhulumi nje kuphela ngemishini yakho eyisisekelo yokuthengisa enikeza ama-chips, amaswidi kanye ne-soda.Imishini yokuthengisa ekhipha yonke into kusuka kumaphiza kuya kumakhekhe kuya enyameni esongwe. Imishini yokuthengisa ye-Upscale iqhuma lapho'kube yindlala yezinketho zokudlela, ikakhulukazi ezikhumulweni zezindiza, lapho ubhadane luye lwavala izindawo zokudlela ezithile, njengemakethe ekhulayo kubo.
Abenzi bemishini yokuthengisa bahlola izindlela zokunciphisa ukuxhumana komhlaba. Kwabanye, lokho kusho ukwenza umshini wokuthengisa lokho'iyahambisana nohlelo lokusebenza, lapho abantu bangenza uku-oda kwabo. Kwabanye, it's ibandakanye ukwenziwa kwamaphedi wokuthinta lapho ukuhambisa phezulu kwanele ukukhombisa ukuthi yini umuntu angathanda uku-oda.
Ukudla isn'okuwukuphela kwento imishini yokuthengisa yobuchwepheshe obuphakeme ebilokhu ithengisa kusukela sekwedlule isikhathi. Ehlobo lika-2020, i-MTA yaqala ukusebenzisa imishini yokuthengisa ukuthengisa i-PPE ngaphakathi kweziteshi ezingaphansi komhlaba. It'ukwandiswa okuthakazelisayo kobuchwepheshe obudala - kodwa ukuthi kuzothinta umhlaba wezentengiso kanye nokuhlinzekwa kokudla ngemuva kokuthi siphume kulo bhubhane ngumbuzo omkhulu.
Amapayipi angaxhumana nawo adinga i-App njengokwesekwa futhi lokhu kunesicelo esikhulu sefoni ephathekayo. Kepha kulezo zindawo lapho i-inthanethi ingakwazi ukumboza kahle, kusacelwa i-pin pad ethintwayo njengakwi-ATM.
Ngakho-ke njenge umenzi we-pin pad, sigcina iso kulo mkhuba ukubheka ukuthi kuhamba kanjani ngokuzayo.
Okwedlule: Ukuxhumana kweXianglong-uzakwethu obalulekile kubakhiqizi bokugcina abazisebenzelayo
Okulandelayo: Sebenzisa i-APP ukuqinisekisa ubudala bokuthenga ubhiya kumishini yokuthengisa ngasekupheleni kuka-2021